I-Polycrystalline diamond compact (PDC) yokusika i-Diamond yeyona nto inzima eyaziwayo. Olu lukhuni lunika iipropati eziphezulu zokusika nayiphi na into. I-PDC ibaluleke kakhulu ekumbeni, kuba idibanisa iidayimani ezincinci, ezingabizi kakhulu, ezenziwe ngobukhulu kubunzima obukhulu, obunqamlezileyo ...
Ziziphi iiDayimane ezikhulile?
Ngamagama alula, iidayimani ezikhulileyo zebhabhi ziidayimani ezenziwe ngabantu endaweni yokumbiwa emhlabeni. Ukuba ilula kangako, unokuzibuza ukuba kutheni inqaku lilonke lingezantsi kwesi sivakalisi. Ubunzima buvela kwinto yokuba amagama amaninzi ahlukeneyo asetyenziselwe ukuchaza ...
Ukonyuka kwemfuno yokuchaneka kunye nezixhobo zoomatshini ngenxa yokunyuka kwemveliso yezithuthi kunye nemisebenzi yokwakha iqhuba isidingo semarike yeSuper Abrasives. ENew York, ngoJuni 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -Imarike yeSuper Abrasives yeHlabathi kulindeleke ukuba ifike kwi-USD 11 ...